Miatrika Volavolan-dalàna Momba Ny Fanarahamaso, Tafalatsaka Antenantenan’ny Fahatairana Sy Ny Tsy Firaharahiana Ny Vahoaka Frantsay · Global Voices teny Malagasy
Miatrika Volavolan-dalàna Momba Ny Fanarahamaso, Tafalatsaka Antenantenan'ny Fahatairana Sy Ny Tsy Firaharahiana Ny Vahoaka Frantsay
Voadika ny 09 Oktobra 2015 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Swahili, русский, polski, Ελληνικά, Deutsch, English
Hetsi-panoherana ny fanarahamaso any Frantsa. Sary tany amin'ny Amnesty International.
Tao anatin'ilay fanafihana Charlie Hebdo, ary na teo aza ny fanoherana mafy nataon'ny vondrona miaro ny fahalalahan'ny olon-tsotra, nandany ny volavolan-dalàna fanomezana alalana ny governemanta hanara-maso ireo antso an-telefona sy mailaka an'ireo ahiahiana ho mpampihorohoro, tsy mila fahazoan-dàlana mialoha avy any amin'ny mpitsara, ny parlemantan'i Frantsa. Mitaky ireo mpanome tolotra Aterineto ihany koa ilay lalàna mba hametraka ny antsoina hoe “boaty mainty” izay mitety sy mamakafaka ny angon-drakitr'ireo mpampiasa vohikala an-tapitrisany, ary manery azy ireo hamela malalaka io angon-drakitra io ho afaka azon'ireo fikambanana fitsikilovana. Manome alàlana ireo mpiasan'ny fikambanana fitsikilovana mba hametraka fandraisampeo kely, fakàna sary, ary fanangonana izay fitendrin'ireo ahiahiana ho mpampihorohoro any an-tranony ihany koa ilay volavolan-dalàna. Araka ilay lalàna, afaka mamela ny fanaovana fanarahamaso amin'ny antony tsy voafaritra mazava tsara aza ny governemanta, sahala amin'ny hoe “tombontsoa lehibe ho an'ny poltika ivelany” sy fisorohana “ny asan-jiolahy voarindra.”
Ireo vondrona mpiaro ny fahalalahan'ny olon-tsotra, ao anatin'izany ny Amnesty International, Article 19, ny Kaomity Mpiaro ny Mpanao Gazety ary ny Global Voices Advox, samy nanjohy ilay taratasy nosoratan'ilay vondrona Frantsay voalohany mpiaro ny zo niomerika La Quadrature du Net, navoaka ny 30 Septambra, natao ho an'ireo solombavambahoaka Frantsay sy nanome andianà sosokevitra maro hanitsiana ilay volavolan-dalàna. Manoratra izao izy ireo:
Amin'io volavolan-dalàna io, toa manaiky ireo fepetra vaovao fanarahamaso tafahoatra hanarahana maso ireo fifandraisana iraisam-pirenena ny parliemanta. Raha mifototra amin'ilay fotokevitra fanangonana faobe ny angon-drakitra, toa mitady hanome vahana ny fanitsakitsahana ny zon'olom-belona sy ny olon-tsotra, izay nabaribarin'i Edward Snowden momba ny fampiasàna ireo masoivoho mpitsikilo toa an'i Etazonia sy Angletera, ilay volavolan-dalàna. Satria mandalo amin'ireo tariby Frantsay any ambanin'ny rano ny làlan'ny Aterineto manerantany, hametraka an'i Frantsa ho ao anatin'ny lisitr'ireo firenena manana fahafahana mitety sy mitsikilo io lalàna io.
Na teo aza ny tsikera mafy nataon'ireo vondrona miaro ny fahalalahan'ny olon-tsotra, fanoherana zara raha nisy avy tamin'ireo vahoaka sy ireo kilasy politika no mba nantrehan'ilay volavolan-dalàna. Avy eo, nangataka ny Filankevitry ny Lalampanorenana ny Filoha Frantsay François Hollande, mba hamerina hijery ilay volavolan-dalàna, taorian'ny nanekena azy tanteraka ny volana jona, manamarika fa voalohany izao no nisy hoe filoha namerina ny raharaha tany amin'ny fitsaràna nialoha ny famelàna ny lalàna iray ho ampiharina. Nanazava ny fizotr'ilay izy ny vohikala Frantsay Les Moutons enragés, namintina ilay tatitra amin'ny antsipirihany nataon'ny Nextimpact :
…Nanivana iray tamin'ireo andalana tao anatin'ilay volavolan-dalànan'ny governemanta nilaza ny fitsikilovana iraisam-pirenena, ny Filankevitry ny Lalampanorenana.
Nahoana? Satria nomen'ilay volavolan-dalàna fahafahana ny didim-pitondràna raisin'ny Filankevi-panjakana mba hamaritra ny mombamomba sy ireo fepetra takiana amin'ny fitrandrahana azy, ny fitahirizana ary ny fanapotehana ireo loharanom-baovao voaangona. Tranganà tsy fahaiza-miasa ratsy [satria araka ny Lalampanorenana Frantsay, natao ho an'ny mpanao lalàna ihany io raharaha io].
Taorian'ny fotoana lavabe nisalasalàna [na nihambahambàna], nambaran'ny governemanta tamin'ny herinandro lasa teo ny fametrahana volavolan-dalàna fanampiny izay natao hamenoana ny banga […] amin'io, sorohany ny fandalovana aminà tolodalàna iray izay mety hanery azy hamoaka ny fanadihadiana ny fiantraikan'io. Dingana mety ho sarotra mantsy io farany io, izay mety tsy maintsy hamborahany indrindra indrindra ny antsipirihan'ireo sandan'ireo fepetra ireo.
Natao amin'ny antsipirihany kokoa ilay andinin-dalàna noho ilay ampahany nesorin'ny Filankevitry ny Lalampanorenana. Efa hita taratra mialoha satria tsy maintsy na(mpa)nolo ilay andàlana saika nataon'izy ireo tamin'ilay lalàna nezahany havoaka taminà didy antsokosoko, ny governemanta.
Raha hijery ny andinindininy an'izay voalazan'io volovolan-dalàna fanampiny momba ny fitsikilovana iraisam-pirenena io, vakio ny tatitra mora takarina nalefan'ny gazetiboky Frantsay l'Obs ny 9 Septambra.
Tonga masiaka haingana ireo vondrona mpiaro ny fahalalahan'ny olon-tsotra, taorian'ny faneken'ny maro ilay lalàna. Ny Amnesty International France niampanga ilay lalàna ho “fikapohana mafy ny zon'olombelona.”
Ny 15 Septambra, nilaza izao tao amin'ny vohikalany ny La Quadrature du Net :
Mandray anjara amin'ny karazana fitsikilovana manerantany ny rafitra fanarahamaso faobe tahàka izao, ary mametraka an'i Frantsa ho fahavalon'ny fahalalahana fototra. Raha toa ka fametrahana ho ara-dalàna fotsiny ny fomba fanao antsokosoko napetraka hatramin'ny taona 2008 io volavolan-dalàna io, dia tena tonga izao ny fotoanan'ny fanehoankevitry ny vahoaka sy ireo mpisolo tena azy, mba haneho mazava ireo heviny amin'io hazakazaka ho amin'ny fiadian'ny taonjato faha-21 io.
Amin'ny lafiny lalàna, efa nisy hetsika natao manoloana ireo fitsaràna Frantsay, teo ambany ezaka niarahan'ny European Digital Rights (Zo Niomerika Eorôpeana) (EDRI, vondrona mitoetra any Bruxelles).
Ny 3 Septambra 2015, ilay Mpamatsy Tolotra Aterineto (ISPs) tsy mitady vola, French Data Network (FDN) sy ny Federasiôna FDN (FFDN), ary hatramin'ny La Quadrature du Net, vondrona mpisolovava mpiaro ny zo niomerika, dia samy nanambara ny fampidirana fanamby roa ara-dalàna teo anoloan'ny Filankevi-panjakana Frantsay, manohitra ny hetsika fitsikilovana ny Aterineto ataon'ireo sampam-pitsikilovan'ny Frantsay any ivelany, Fintantànana Ankapobeny ho an'ny Fiarovana Ivelany (Direction générale de la sécurité extérieure – DGSE).
Mihazakazaka ny fikarakaràna hetsi-panoherana manodidina ilay volavolan-dalàna, na dia tara aza.
@couragesnowden Ndeha isika hananena ny ho fahatomombanan'ny demôkrasia, hànana ‘Snowden’ Frantsay isika izany.